आफ्ना विद्यार्थीले अघि सारेको रोबो भ्यान बनाउने योजनालाई विश्वविद्यालयले नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । केयूका विद्यार्थीले पेस गरेको प्रस्ताव नास्टले स्वीकृत गरेको थियो । नेपालमा नै पहिलो पटक निर्माण सुरु गरिएको रोबो भ्यान निर्माणका लागि करिब १० लाख रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ । रोबो भ्यान निर्माणका लागि नास्टले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई १० लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको विश्वविद्यालयका एसोसियट डीन
डा. बीमप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
रोबो भ्यान बनाउन कार्कीको नेतृत्वमा सञ्जीव पोख्रेल, शैलेश भट्ट, आर्जन आचार्य, विशाल भेटवाल र सुदीप फुयाँल सक्रिय रहनुभयो । विश्वविद्यालयका एसोसियट डीन डा. बीमप्रसाद श्रेष्ठले र प्रोफेसर डा. रमेश माकजुले आइपर्ने समस्याको समाधानमा लाग्नुभएको छ । कोरोना भाइरसका कारण भएको बन्दाबन्दी तथा बजारमा आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण काममा ढिलाइ भएको एसोसियट डीन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।